यो घटना सुन्दाखेरी डरलाग्दो घटना हो । तर, जुन परिवारमा यो घटना घट्यो त्यो परिवारमा भने अहिले खुशीयाली छाएको छ । चीनको सिचुआन प्रान्तमा एक ७५ बर्षीय मानिस मरिसकेको ८ घन्टा पश्चात बिउतिएर उठेका थिए । हु...
आमा प्रेमी भेट्न गएपछि खान नपाएर २३ महिने छोराको मृत्यु
लन्डन । बालबालिकाको जीवनमा आमाको महत्व अति नै हुन्छ । त्यसैले त मानिस आमालाई धेरै सम्मान गर्छन् । तर, यूक्रेनमा आमा प्रेमी भेट्न गएपछि खान नपाएर एक २३ महिने बालकको मृत्यु भएको छ । प्रेमी भेट्न पुगे...
के प्रेम गर्ने हरुले कुुनै साईत तिथि मिति हेरेर गर्ने गरेका हुन्छन त ? अवश्य पनि हुन्नन जस्तो लाग्दछ तर, हालै भएको एक अनुसन्धानले प्रेम गर्नेहरुका लागि जनवरी ९ को दिन निकै खतरनाक हुने गरेको देखाएको छ ...
सुरुङमार्ग जस्तो रुखको फेदभित्रैबाट गुड्थ्यो गाडी
के रुखभित्रैबाट गाडी छिर्छ ? यसो भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । हो, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको यस्तो भीमकायी रुख, जसले थुप्रै विशेषता बोकेको थियो । यो अमेरिकाको सबैभन्दा चर्चित र एक हजार वर्ष पुरा...
बलात्कार घटनाहरु हिजोआज प्राय नौला हुँदैनन्, त्यसमा पनि किसोरावास्थाका महिलाहरु प्राय बलत्कारको शिकार बढि हुने गरेका छन् । तर एक जना पुरुष महिलाको सामुहिक बलात्कारमा परेका छन् । जिम्बाबेका हारारे भ...
रुबीको सानो भूूलले पर्योे यस्तो फसाद्
भूलबस निमन्त्रणा फेसबुकमा हालेपछि एक युवतीलाई जन्म दिनमा भ्याइ नभ्याइ परेको छ । उनको त्यो फेसबुके निमन्त्रण भाइरल बन्न पुगेर दिवाभोजमा करिव ३० हजारको उपस्थिति भएको थियो । गत डिसेम्वर २६ मा ला जोया गाउ...
रोमान्टिक जोडीहरुलाई खुसीको खवर छ । अब किसेन्जरमार्फत च्याटमा एक अर्कालाई किस खान सकिने भएको छ । लण्डनस्थित सिटी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी एम्मा यान झाङले च्याट गर्ने मेसेन्जरजस्तै किस...
दुई वर्षीय बालकको साहस, दराजले किचेका भाइलाई यसरी जोगाए(भिडियोसहित)
दुई वर्षीय बालकमा कति बुद्धि र बल हुन्छ ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर समाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो फुटेजले भने साना बालकमा पनि धेरै बुद्धि र बल हुन्छ भन्ने दखाउँछ । एउटा कोठा । ...
महिलाले खाँदै गरेको खाजामा लिङ्ग भेटिएपछि…
नेपालमा मात्र नभई संसारमै बढी रुचाईएको खाजामध्ये अग्रपंक्तिमा पर्न आउँछ ससेज । ससेजको स्वाद चाख्न प्राय मानिस घरमा भन्दा पनि अझ बढी रेष्टुरेन्टतिर धाउने गर्छन् । यसरी खाजा खाने क्रममा ससेज अर्डर गर...
इटालीकी एक समाचारवाचिकाले समाचार वाचन गरिरहेकै बेला आफ्नो भित्री वस्त्र देखाएकी छन् । उनले देखाएको भित्री बस्त्र पेन्टी हो । यद्यपि उनले जानाजानी पेन्टी देखाएकी होइनन् । इटालियन टेलिभिजन च्यानल टीज...
प्रेममा धोका दिएको भन्दै जब प्रेमीले प्रेमिकाको कपाल मुन्डन गरे
ब्राजिलमा एक युवाले आफूलाई प्रेममा धोका दिएको भन्दै प्रेमिकाको कपाल मुन्डन गरेका छन् । लागूऔषध कारोबारी ती युवकले प्रेमिकालाई पक्रिएर सबैको सामु कपाल मुन्डन गरिदिएका हुन् । ती युवाले आफ्नी प्रेमिकामा...
एजेन्सी । अपराध गरेर कारागार पुगेका कैदीको संरक्षणमा खटिएका प्रहरी जवानले उपचार गर्न लैजान्छु भन्दै अस्पताल लगेर मस्ती गर्दै आएको खुलासा भएको छ । महिला कैदीलाई उपचारको वहाना बनाउन उत्प्रेरित गरी उपचा...
यि पुरुष, जोसंग सेक्स गर्न युवतीहरु लाइन लाग्छन्
एजेन्सी । नेपाली समाजमा महिलाहरुले पुरुषहरुलाई सेक्स अफर गयो भने अचम्म मान्नु पर्छ । यदि गरिहाले पनि त्यस्ता महिलालाई सकारात्मक रुपमा लिइन्न । उसको नियतमाथि पनि प्रश्न चिह्न उठाइन्छ । तर, स्कटल्याण...
अदर वल्र्ड किंगडम । भनिन्छ, विश्वमै महिलामाथि पुरुषहरुले शासन गर्छन् । शारीरिक रुपमा कमजोर हुने हुनाले पनि महिलामाथि पुरुषहरुले शासन गर्ने गरेको भन्ने गरिन्छ । पुरुषहरुले शासन गर्ने हुनाले त्यस्तो समा...
एजेन्सी । दुनियाँमा को मूर्ख होला, जसले आपूmलाई कुनै प्रहरीले पक्रियोस् भन्ने चाहन्छ । तर जर्मनीका मानिसहरु भने एक जना प्रहरी अधिकारीको हातबाट आफूलाई पक्राउन चाहन्छन् । भलै नपक्रिउन । कम्तीमा ती प्रहर...
इस्लामिक स्टेटको आतंक यतिबेला विश्वकालागि चुनौती बनेको छ। तर विश्वकालागि चुनौती बनेको आइएसकालागि भने एक २३ वर्षीया युवती चुनौती बनेकी छन्। आतंकवादी संगठन आइएससँग युद्ध गर्न एक युवतीले हतियार उठाएपछि ...
एउटा तस्वीर, हेर्दा अश्लिल तर हृदयविदारक
एजेन्सी । एउटा यस्तो तस्विर जसलाई बुझ्न संसारलाई धेरै समय लाग्यो । विश्लेषकहरु पनि यति दोधारमा परे कि जबसम्म चित्रकार स्वयंले यो तस्विर पछाडिको रहस्य खोलेनन् । कारण तँपाईं हामी सजिलै देख्छौं कि यो तस्...
विवाहको केहीदिन अघि केटीसँग शारिरीक सम्पर्क गरेर विवाह तोडे केटाले
बिवाह हुने तयारी थियो । केटाले प्रस्ताव गरे शारिरीक सम्पर्कका लागि । श्रीमान हुने पक्का पक्की नै भइसकेकाले उनले पनि नाइ नास्ती गरिनन । सहमतिमा यौन सम्पर्क भयो । तर यौन सम्पर्क भएको दुईदिनमा नै उनले ...
जहाँ चिहानबाट युु्वतीको लास निकालेर विवाह गरिन्छ
सन्सारमा बिवाह सम्वन्धि अचम्म अचम्मका चलनहरु रहेका छन् । चीनको एउटा गाउँमा भएको बैवाहिक संस्कारको बारेमा सुन्दा तपाइँ छक्क पर्नुुहुुन्छ साथै उदेक पनि लाग्न सक्छ । जहाँ अविवाहित केटाहरुको विवाह अविवा...
खानामा हरेक दिन किलो बालुवा
१५ बर्षकी हुँदा उनले पेट असाध्यै दुख्यो । एक वैद्यले लभने दुध र बालुवा मिलाएरु खायो भने निको हुन्छ । सायद संयोग मिल्यो भने अनुसार निको पनि भयो । निको त भयो तर कस्तो मिल्यो थाहा छैन उनलाई बालुवा खाने ब...